အသစ် Meizu သုံးဒီမှာ! မိတ်ဆက်ပေးပါသည်။ Meizu 15, 15 Plus နှင့် M15 | Androidsis
မနေ့ကငါတို့အရင်ကမျှော်လင့်ထားသလိုပဲ ဤဆောင်ပါးMeizu သည်၎င်း၏သုံးဖုန်းအသစ်ကိုမိတ်ဆက်ခဲ့သည်။ ကျနော်တို့ Meizu 15, Meizu 15 Plus နှင့် M15 အကြောင်းပြောကြသည်, Meizu 15 Lite ဟုလည်းခေါ်သည်၊ ဖော်ပြခဲ့သောပထမနှစ်ခု၏ပိုမိုကျိုးနွံသောမူကွဲဖြစ်သည်။
terminal တစ်ခုချင်းစီ၏ဝိသေသလက္ခဏာများနှင့်သတ်မှတ်ချက်များအရ Meizu 15 Plus ရှိ Samsung ပရိုဆက်ဆာအတွက် Meizu ရွေးချယ်မှုကိုမီးမောင်းထိုးပြထားသည်, နှင့်အလယ်ပိုင်းမော်ဒယ်နှင့် Lite ဗားရှင်းနှစ်ခု Qualcomm မှအားဖြင့်။ အာရှကုမ္ပဏီသည်ဤအရေးကြီးသောကဏ္inတွင်အသုံးမ ၀ င်သောကြောင့်မိုဘိုင်းတစ်ခုချင်းစီ၏ဓာတ်ပုံအပိုင်းကိုကျွန်ုပ်တို့အထူးအလေးထားသည်။
ထိုအခါ ကျွန်ုပ်တို့အနေဖြင့်အမြင့်ဆုံးမှအနိမ့်ဆုံးအထိပစ္စည်းတစ်ခုစီ၏အရည်အသွေးများအသေးစိတ်ကိုသင့်အားပေးသည်. ငါတို့စခဲ့တယ်!
0.1 Meizu 15 Plus အား
0.2 မီဇူး ၁၇
Meizu 15 Plus အား
Meizu 15 Plus သည်ဤစမတ်ဖုန်းအသစ်သုံးခု၏စွမ်းအားအရှိဆုံးဖြစ်သည်မျက်နှာပြင်အနေဖြင့် 5.95: 16 QHD resolution ပါဝင်သည့် ၅.၉၅ လက်မ AMOLED မျက်နှာပြင်တပ်ဆင်ထားသည်။ ထို့အပြင်၎င်း၏အတွင်းပိုင်းအပိုင်းအတွက် ဒီပစ္စည်းကိရိယာကိုရှစ် core Samsung Exynos 8895 ပရိုဆက်ဆာ (4GHz ၏ 2x Exynos M2.3 + 4GHz ၏ 53x Cortex-A1.7) ဖြင့် Mali-G71 GPU ပါရှိသည်, 6GB RAM၊ 64 / 128GB သိုမဟုတ်သိုလှောင်နိုင်သည့်သိုလှောင်နိုင်သည့်နေရာနှင့်အမြန်အားသွင်းနိုင်မှုအတွက်အထောက်အပံ့ပေးထားသော ၃၅၀၀mAh စွမ်းရည်ရှိသည့်ဘက်ထရီ။
အခြားတစ်ဖက်တွင်, ၎င်းတွင် 12MP + 20MP dual အနောက်ကင်မရာနှင့် OIS နှင့် EIS တို့ပါဝင်သည်, ပထမအာရုံခံကိရိယာတွင် 3X Optical Zoom၊ ဒုတိယပေါ်ရှိ 2X Optical Zoom, HDR လုပ်ဆောင်ချက်နှင့်ပိုမိုရှင်းလင်းသောဓာတ်ပုံများအတွက်ဆူညံမှုလျော့ချခြင်းစနစ်။ ဒီအပြင်, မျက်နှာကင်မရာနည်းပညာနှင့်ပေါင်းစပ်ထားသည့် 20 megapixel ရှေ့အာရုံခံကိရိယာရှိသည်၀ င်းဒိုးကို ၀.၀၈ စက္ကန့်အတွင်းမှာသော့ခတ်နိုင်သည့်လက်ဗွေဖတ်စက်တစ်ခုတပ်ဆင်ထားပြီး microUSB Type-port၊ နားကြပ်တွေအတွက် ၃.၅ မီလီမီတာ Jack port၊ 0.08G LTE ဆက်သွယ်မှု၊ Bluetooth v3.5၊ WiFi, GPS၊ ၇၈.၂၅ x ၇.၂၅ မီလီမီတာရှိပြီးအလေးချိန် ၁၇၇ ဂရမ်ရှိသည်။
Meizu 15 တွင် ၅.၄၆ လက်မ ၁၆: ၉ AMOLED မျက်နှာပြင်တပ်ဆင်ထားသည် လိုက်ပါသွား Qualcomm Snapdragon 660 ရှစ် core ပရိုဆက်ဆာ (4x Kryo 260 တွင် 2.2GHz နှင့် 4x Kryo 260 တွင် 1.8GHz)၊ 4GB RAM၊ 64 / 128GB internal memory နှင့် ၃၀၀၀ mAh ဘက်ထရီသည်အားသွင်း။ မြန်သော mCharge 3.000 ကိုထောက်ပံ့သည်။ ထို့အပြင် 4.0 Plus ကဲ့သို့၎င်းတွင် Type-microUSB port၊ ၃.၅ မီလီမီတာ Jack port၊ မျက်နှာအသိအမှတ်ပြုခြင်း၊ လက်ဗွေဖတ်စက်ကိုတပ်ဆင်ပါ။ ဒီဆဲလ်ဖုန်းက ၁၄၃ x ၇၂ x ၇.၂၅ မီလီမီတာရှိပြီးအလေးချိန် ၁၅၂ ဂရမ်ရှိသည်။
ဓာတ်ပုံအပိုင်းမှာမူ Meizu 15 Plus ကဲ့သို့ကင်မရာများအတူတူပင်ရှိသည်, သို့သော် EIS ဒစ်ဂျစ်တယ်တည်ငြိမ်မှုနည်းပညာမရှိခြင်းနှင့်၎င်း၏နောက်ဘက်အာရုံခံကိရိယာအပေါ် 2X Optical Zoom သာနှင့်အတူ။
အနည်းဆုံးတော့အနည်းဆုံးတော့ကျွန်ုပ်တို့မှာရှိသည် Meizu M15 သည်သူတို့နှစ်ယောက်၏ညီငယ်ဖြစ်သည်.
ဤဖုန်းတွင် Meizu 5.46 ရှိသည့် ၅.၄၆ လက်မမျက်နှာပြင်တူညီသည်။ သို့သော် AMOLED နည်းပညာမဟုတ်ဘဲ LTPS LCD နှင့်၎င်း၏ resolution သည် 15 x 1.280 pixels (720: 16) သို့ကျဆင်းသွားသည်။ တစ်ချိန်တည်းမှာပဲ, ၎င်းတွင် octa-core Qualcomm Snapdragon 626 SoC (4x 53GHz Cortex-A2.0 + 4x 53GHz Cortex-A2.0) တပ်ဆင်ထားသည်။Adreno 506 GPU၊ 4GB RAM၊ 64GB ROM နှင့် 3.000 mAh ဘက်ထရီ၊ mCharge 4.0 မြန်သောအားသွင်းနည်းပညာနှင့်အတူ။ အလေးချိန် ၁၄၅ ဂရမ်အလေးချိန်ရှိပြီး ၁၄၃.၆၂ x ၇၂.၃၈ x ၇.၄၅ မီလီမီတာရှိသည်။
ဓာတ်ပုံပြissueနာနှင့်စပ်လျဉ်း။ M15 တွင်f/ 12 focal aperture နှင့် Dual Pixel autofocus နည်းပညာပါဝင်သည့်တစ်ခုတည်းသော 1.9 megapixel အာရုံခံကိရိယာတပ်ဆင်ထားသည်။နှင့် selfie တိုးတက်စေရန် AI နှင့်အတူအခြားအဓိကနှစ်ခုမျိုးကွဲများကဲ့သို့ 20MP ရှေ့မျက်နှာစာ။
Meizu သည်စမတ်ဖုန်းများကိုAprilပြီလ ၂၉ ရက်တွင်တရားဝင်ရောင်းချမည်ယခုအချိန်တွင်တရုတ်စျေးကွက်၌သာ၎င်းတို့ကိုကျွန်ုပ်တို့ဝယ်ယူနိုင်သည့်ရက်စွဲ။
ယွမ် ၃၂၉၉ အတွက် Meizu 15 Plus (6GB + 128GB) (427 ယူရိုခန့်မှန်း။ ) ။
ယွမ် ၃၂၉၉ အတွက် Meizu 15 Plus (6GB + 64GB) (389 ယူရိုခန့်မှန်း။ ) ။
၂၇၉၉ ယွမ်အတွက် Meizu 15 (4GB + 128GB) (363 ယူရိုခန့်မှန်း။ ) ။
၂၇၉၉ ယွမ်အတွက် Meizu 15 (4GB + 64GB) (327 ယူရိုခန့်မှန်း။ ) ။
ယွမ် ၁၆၉၉ အတွက် Meizu M15 (4GB + 64GB) (220 ယူရိုခန့်မှန်း။ ) ။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » NOTICIAS » အသစ် Meizu သုံးဒီမှာ! မင်းတို့ကို Meizu 15, 15 Plus နှင့် M15 နဲ့မိတ်ဆက်ပေးတယ်